Tsika Plasma & Flame Kucheka Service Service & Mugadziri | Hengli Metal Kugadziriswa
Kugadzira kwaHengli kunoshandisa CNC michina yeplasma. Plasma yekucheka tekinoroji inotigonesa kucheka simbi neukobvu hwe 1… 350 mm. Yedu plasma yekucheka sevhisheni inoenderana nemhando yepamusoro EN 9013.
Plasma kucheka, senge murazvo kucheka, inokodzera kucheka gobvu zvinhu. Kubatsira kwayo pamusoro peiyo yekupedzisira mukana wekutema zvimwe simbi uye maalloys ayo asingakwanisike nekucheka murazvo. Zvakare, iyo inomhanya inomhanya zvakanyanya kupfuura nekucheka murazvo uye hapana chikonzero chekutanga kupisa simbi.
Kufaira Workshop yakavambwa muna 2002, unova musangano wekutanga mukambani medu. Vanenge vashandi 140. 10 seti murazvo wekucheka michina, 2 seti yeCCC plasma yekucheka michina, 10 hydraulic anodzvanya
Tsanangudzo yeCNC Flame Cutting Service
Kwete yemidziyo: 10 pcs （4/8 pfuti）
Kucheka ukobvu: 6-400mm
Kushanda Tafura: 5.4 * 14 m
Tsananguro yeCNC Plasma Kucheka, Kuenzanisa & Kuumba Service
CNC Plasma Kucheka Muchina
Kwete yeMidziyo: 2 seti （2/3 pfuti）
Tafura Saizi: 5.4 * 20m
Kucheka simbi: kabhoni simbi, simbi isina chinhu, mhangura, aluminium nezvimwe simbi
Kwete yeMidziyo: 10 sets
Inyorerwa: kuenzanisa & kugadzira
Zvakanakira Plasma Kucheka
Mari yakaderera - Imwe yemabhenefiti akakosha iwo mutengo wakaderera webasa rekucheka plasma kana ichienzaniswa nedzimwe nzira dzekucheka. Mutengo wakaderera webasa unobva pane akasiyana maficha - mitengo yekushanda uye kumhanya.
Yekumhanyisa - Plasma yekucheka sevhisi imwe yemabhenefiti makuru ndiko kukurumidza kwayo. Izvi zvinonyanya kuoneka nesimbi mahwendefa, nepo laser yekucheka iri yemakwikwi kana zvasvika kune jira kucheka. Iyo yekuwedzera kumhanyisa inogonesa kuburitsa huwandu hukuru mune yakapihwa nguva-furemu, ichideredza mutengo pachikamu.
Kuderera kwekushanda zvinodiwa - Chimwe chinhu chakakosha kuchengetedza mitengo yebasa pasi. Plasma vanocheka vanoshandisa yakamanikidzwa mweya nemagetsi kushanda. Izvi zvinoreva kuti hapana michina inodhura inodiwa kuperekedza mucheki weplasma.
Pashure: Logistic Center
Zvadaro: Pedzisa Kurapa Service